Tsingerintaona nahaterahana ｜ Sinocare tsingerintaona faha-19-News-Sinocare
Tsingerintaona nahaterahana ｜ Tsingerintaona faha-19 Sinocare
Fotoana: 2021-08-10 Hits: 37
Tamin'ny 7 aogositra 2021, ny fiandohan'ny fararano, ny tandindon'ny fanantenana sy ny fijinjana ny valizy, dia nanomboka ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ireo telo taona 19, telo avaratra "tamin'ny fanaovana sy fanajana ny teny fikasana mbola afaka mitia anao," tsingerintaona faha-19 ny lohahevitra SiQing andro ao amin'ny foibeny ao changsha, isaky ny birao ny namanao dia fo telo ihany koa, amin'ny fijerena endrika mivantana, miaraka amin'ireo rehetra telo ireo handany fotoana miaraka amin'ny kalitao.
Tamin'ny 9 ora maraina, andro iray tsy hay hadinoina no natomboka tamin'ny hira nahafinaritra nataon'ny foibe sy ny birao vahiny. Eny, na dia tany Changsha aza no toerana tena anananay, nandefa ny firarian-tsoa fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo ho an'i Nuo son ny namana an'arivony! Handresy ahy ny feon'izy ireo ambony indrindra, nanapa-kevitra ny hitodika ho anao ny zanakalahy nuo.
Ho avy ny hetsika valan-javaboary izay antenaina indrindra! Ho rakotra tranobe maro ilay toerana goavambe, ary tapakila sarobidy miisa 240 no namidy avy hatrany! Ireo mpaka sary matihanina dia manaraka ny hetsika iray manontolo!
Jereo ireo zatovolahy mifaninana amin'ny vondrona hitadiavana sy hanangonana saribakoly 16 mampiseho ny fiahian'ny mpiasa miafina ao anaty gorodona! Amin'ity lalao ity, izay olona maka sary miaraka amina mpiasa taloha iray izay niditra tao amin'ny orinasa talohan'ny 2010 dia afaka manavotra toko iray misolo toerana .Aoka isika hihazakazaka, hiara-miasa, hifandray ary hikasika hatrany hatrany ary alao ilay fahasambarana kely miafina ao amin'ny gorodona!
Inona no atao hoe fahasambarana?
Ny fahasambarana dia midika hoe firenena milamina sy vahoaka azo antoka, fiafarana mialoha ny valanaretina ary tsy safo-drano intsony. Ny fahasambarana dia midika hoe fiezahana hahatsapa ny fiovana isaky ny dingana, ny fahazoana ireo fahafaha-manao hatsarana tsy manam-petra ary ny fijinjana aorian'ny asa mafy. Midika izany fa na aiza na aiza alehanao dia misy olona miraharaha, tia ary miaraka aminao, ary ireo fahasambarana rehetra ireo dia azo tanterahina ao Sanpromise.
Pejy manaraka: Tongasoa eto ny masoivohon'i Ogandà hitsidika an'i Sinocare